Ukwakhiwa isakhiwo zokuhlala - lena msebenzi omkhulukazi, okuyinto kubaluleke unjiniyela onquma lokho kuyoba usayizi indlu esizayo, bangaki izibuya lapho kuthunyelwe (ku insimu) futhi ezinye izinto zokwakha saphansi. Kuphela ukuchaza lezi zici eziyisisekelo, ungakwazi uqhubekele ukukhethwa iphrojekthi ekhaya, enkampanini yokwakha, okuyinto uzokwazi ukusebenzisa kwiphrojekthi esikhathini esifishane futhi ngenani lentengo elikahle.
Ngakho, enye zokwakha ethandwa kakhulu kungenziwa kubhekwe njengento isihlahla. ugodo Okwenziwe kusukela izingodo kuthandwa kakhulu, futhi ngenxa yalokho kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ukwakhiwa yangasese. Ikhaya kusuka ibha nge Loft - ke ingenye esiwusizo kakhulu, elula futhi ezingabizi izinhlobo izindlu, okuyinto uhlala namuhla isiqongo ukuthandwa kwakhe.
Kalula futhi Amatebhe endlini - iphupho zonke umnikazi
Kungani ukwakhiwa emizi yabantu kungcono ukuba afeze ngosizo zokwakha ngokhuni? Impendulo ilula, ngoba indlu kusuka ibha nge Loft libhekene nemingcele yaso ephezulu zobuchwepheshe, njenge:
ezingeni lelisetulu ukusebenza;
the cheapness isihlobo.
Lokhu akulona lonke uhlu izinzuzo izindlu ezakhiwe ngokhuni phambi isitini noma izakhiwo ngamapulangwe, kodwa okusobala kakhulu. Uma ufuna ukwakha indlu kusuka ibha nge Loft, unjiniyela kufanele baphendukele abaklami abaqeqeshiwe kahle ukubala umthwalo phezu kwezinsika asekelayo, ilungelo ngeke wenze iphrojekthi yendlu esizayo bese ukhetha uhlobo oluhle lwamakholi izingodo.
I zokwakha akhethiwe incike ukuqina isakhiwo esizayo
Isici zokwakha izinkuni ukuncipha, okuyinto eyenzeka kunoma isiphi isimo. Into ebaluleke kakhulu - ukwenza inqubo ubuncane, futhi ukuvimbela ukusonteka ingqikithi imishayo ngabanye, kufanele ukhethe uhlobo olufanele log. Zonke izikebhe lwamakholi zihlukaniswe ngezigaba ezimbili: a ezisalayo futhi ngaphandle ezisalayo. Ukuze izakhiwo zokuhlala, ukusetshenziswa kangcono ifreyimu okusele - kunika ezingeni lelisetulu ukuqina, ukwahlukanisa nokuphepha ukwakhiwa. Ngesikhathi esifanayo, kunezinhlobo eziningi isidumbu okusele ezahlukene.
Khetha uhlobo lwamakholi ukwakhiwa ugodo izindlu
Ngokwesibonelo, ethandwa lokwakha log-indlu - kuyinto:
"Ephendukezelwe inkomishi" nokunye. D.
Kuyinto zalezi zinhlobo lwamakholi kumakhabheni okuhlala, ngoba abakhi, udala design yendlu kusuka ibha 6x8 nge Loft, ngokuvamile zisebenzisa esinye salezi izinketho. Uma kuziwa ukuhlela nokwakha lesifanele, ukusetshenziswa okunengqondo isikhala, khona elisophahleni lwendlu - ke ukhetho best. Nakuba ngaphambili elisophahleni phezu kophahla lwendlu - kwaba igumbi Umbuso indawo, lapho wenza ngisho esitolo, kodwa manje abathuthukisi sizama ukusebenzisa etholakalayo amavidyo isikwele esiphezulu, okwenza lo okuthiwa elisophahleni yokuhlala indawo endlini.
Ikhaya kusuka ibha nge Loft - stylish, eliphezulu futhi elula
Nakuba elisophahleni - kuleli gumbi oluphakeme encane, kodwa usengakwazi yindawo enhle uphumule, isibonelo, ingxenye lokulala ezincane endlini. Enye into ayicabangele lapho ekhetha 6x8 endlini iphrojekthi kusuka ibha nge Loft - ulula. Uyingxenye yendlu kufanele kube esiphezulu ukuthi igumbi akazange kubonakale engaphansi noma ibhokisi zangaphansi, futhi ekamelweni elihlukile. Okungafanele aphanjaniswe kukhethwa elungile, iphrojekthi ofanele, kufanele akhethe inkampani ukwakhiwa okuthembekile and umklami, ngubani vele kuphothifoliyo ongakhetha ngomumo eyenziwe, ekhaya kusuka ibha izifanekiso.
Isikhathi esining impela, onjiniyela ekuqaleni wayecabanga ukuthi ukudalwa iphrojekthi entsha - kuba zibelula, kodwa, njengoba kuvela kamuva, ngokuvamile ngentuthuko yakamuva nje musa ukuhlangabezana nezidingo yesimanje ngemva kweminyaka embalwa, ngoba izifanekiso noma imiklamo eziwusizo kakhulu futhi ukonga, kodwa kuxhomeke ngokuphelele ukwakhiwa ekhethiwe inkampani.
Sebenzisa isikhala atholakale esiphezulu - isifiso sayo yonke Umakhi
Lapho kukhona uzungu futhi ufuna ukuyisebenzisa ukuze kuzuze esiphezulu, wakha indlu kusuka ibha 6x8 nge Loft - kungcono kukho olukhulu. Attica - akuyona nje enhle ukuba uphumule, kodwa futhi ekamelweni ezengeziwe, okuyinto kuyoba usizo kakhulu, lapho endaweni ingqikithi le ndlu isesimweni esibi ezingaphezu kuka-50 square metres. m.
Ukuba khona elisophahleni lwendlu ekwakhiweni kwendlu akuyona ikakhulukazi ehlaselwe uhlelo nokwakhiwa yephrojekthi, ngenxa ophahleni futhi ophahleni elisophahleni akufanele kube kwenye ingxenye kophahla lwendlu, ezifana verandas.
Yakha indlu iphupho - whom ukuphathisa kulolu hambo?
Uma ufuna ukwakha indlu kusuka ibha 6x9 nge Loft, kubalulekile ukuba acabangele into eyodwa: zokusebenzisa ukhuni kudinga ezandleni abakhi abanolwazi, ngoba kufanele bakhethe enkampanini yokwakha, lapho inani labasebenzi phakathi kwababusi ochwepheshe oseneminyaka engu-. Kuphela abakhi onolwazi kungakwenza ukukhomba "izingibe" uma udala iphrojekthi futhi ugweme zokugwema noma "umshado" ngesikhathi kwakhiwa. Kufanele ukhethe inkampani, okuyinto has imishini yesimanje, ezifana machines ephakamisa namayunithi ukwenza noma imuphi umsebenzi nge isisekelo noma yokululama okuthunyelwe. Kubalulekile ukunaka ukuthi ukhona "iphothifoliyo" kusukela inkampani ekhethiwe ukwakhiwa. It has izibonelo siphelile, amaphrojekthi igcwaliswe zingakufakazela Ukuthembeka
futhi ngemali ephansi, okwakubekelwa embukisweni kumasevisi izinkampani ukwakhiwa.
Uma ufuna ukwakha indlu kusuka ibha 6x6 nge Loft, kufanele ukhethe ngokuqinile okuthembekile wamapulani abanolwazi, khetha zokwakha eliphezulu futhi ube nesineke ulinda thimba longcweti is ukusebenzisa iphrojekthi.